မော်ရိုကိုနိုင်ငံ သတ္တုတွင်းမြို့တစ်မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲများ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ - Yangon Media Group
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ သတ္တုတွင်းမြို့တစ်မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲများ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ်ဖြစ
ရာဘတ်၊ မတ် ၁၅
မော်ရိုကိုနိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း ဂျီရာဒါမြို့တွင် ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ပေး ရေး တောင်းဆိုသော ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မတ် ၁၅ ရက် ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။ ဂျီရာဒါသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော သတ္တုတွင်းမြို့ တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဂျီရာဒါမြို့တွင် သတ္တုတွင်း အလုပ်သမားနှစ်ဦး မတော်တဆမှုတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထိုဖြစ်ရပ် နောက်ပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြပွဲများဆက်တိုက် ပေါ်ပေါက်နေခဲ့ရသည်။ ဆန္ဒပြသူများသည် အစိုးရ၏ အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပိုမိုရရှိရန်၊ သတ္တုတွင်းအပြင် အခြား အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးရန်တောင်းဆိုကြသည်။ ယခု နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားသည့် ဆန္ဒပြပွဲတွင် ရဲကား ငါးစီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ အချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံတင် ကုသခဲ့ရသည်။ ဆန္ဒပြသူကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြပွဲများ မရပ်တန့်ပါက ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူမည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းကို မိမိတို့ မကျေနပ်သည့်အတွက် ထိုင်သပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်ဟု ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ လူမှုမီဒီယာတွင် ထွက်ပေါ်လာ သော ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် လုံခြုံရေးများက မျက်ရည်ယိုဗုံးများ ပစ်ခတ်ပြီး ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆန္ဒပြပွဲကို လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ၅ဝဝ ခန့်က ဖြိုခွင်းခဲ့သည်ဟု အမည်မဖော် လိုသော ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားသည်။
မော်ရိုကိုနိုင်ငံသည် စည်းမျဉ်းခဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသည်။ မော်ရိုကို နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးသည် အ နောက်နိုင်ငံများအတွက် အရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မော်ရိုကိုသည် ဒေသတွင်းအစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့များကို ချေမှုန်းရာတွင် အနောက်နိုင်ငံများကို ကူညီနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စစ်မှု မထမ်း မနေရ အချိန်ကာလကို လျှော့ချမည်
အမျိုးသား အဆင့် ရိုင်ဖယ် အသင်းကို သောင်းနှင့် ချီသော အမေရိကန် ကျောင်းသားများ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
မကြုံစဖူး မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဂျပန်တွင် အနည်းဆုံး လူ ၆၆ ဦးခန့်သေဆုံး
နေပြည်တော်တွင် ဒီချုပ်ရုံးခွဲဖွင့်ရန် မြေ ၁၆ ဧကကို ကျပ်သိန်းပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် ဝယ??
မလေးရှား ဆိုင်ကယ်စီး အဖွဲ့ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှ မြဝတီမြို့သို့ ဝင်ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည်??
မသန်စွမ်းသူများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက် အတားအဆီး၊ အဟန့်အတား မဖြစ်စေသည့် ကမ္ဘာသုံးပံ??
ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီ ပခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးကိုကိုကြီးကို ရွေးချယ်
အမေရိကန် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များ ကားပေါ်၌ အနေများကြ
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ(ဗကသ) များ အဖွဲ့ချုပ်က ကျောင်းအတွင်း လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် Reform စပြီလား
မြဝတီမြို့သို့ ခရီးသွားများ လာရောက်မှု များပြားနေသောကြောင့် ဧည့်ရိပ်သာတစ်ခု တည်ဆောက်မည်